रियल स्टेट Archives - Page2of 13 - Chanakya Post
चन्द्रागिरी हिल्सले ७ रोपनी जग्गा बेच्दै, बैंकको ऋण घटाउने
काठमाडौं। चन्द्रागिरी हिल्सले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्ग विक्री गर्ने भएको छ। हिल्सले थानकोटस्थित त्रिभुवनपार्कसँगै जोडिएको अब प्रयोगमा नआउने ७ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा विक्रीमा राखेको हो। कम्पनीले परियोजना बनाउने बेलामा उक्त जग्गामा बेस स्टेशन र पार्किङस्थल बनाउने भनेर किनेको थियो । तर, निर्माणका क्रममा बेस स्टेशन सरेपछि अब त्यो जग्गा प्रयोगमा नआउने […]
कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा वीरगञ्जको १०० बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा
वीरगञ्ज । भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको करोडौँ मूल्य बराबरको सार्वजनिक जग्गाको खोजबिन शुरु भएको छ । मुख्य बजार क्षेत्र आदर्शनगरलगायत ३२ वटै वडामा रहेको सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका त्यस्ता जग्गाहरु वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो नाममा ल्याउने अभियानको थालनी गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा कहाँ […]
सेयर जस्तै घरजग्गाको करोबार गर्न ‘ल्याण्ड मार्केट’ स्थापनाको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई संस्थागत एवम पारदर्शी बनाउन ‘भूमि बजार’ स्थापना गर्ने भएको छ । घरजग्गा खरिदविक्री गर्दा कर तथा राजस्व छली हुनुका साथै ठगीका घटना बढेको भन्दै सरकारले कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । यस माध्यमबाट सेयर कारोबार गरे जसरी नै घरजग्गाको कारोबार गर्न सकिने छ । भूमि व्यवस्था, […]
महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिवास नगर क्षेत्रमा सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी जग्गा व्यवस्थित गर्न थालेसँगै भूमाफियाहरुको जगजगी बढेको छ । सरकारले बर्दिवास नगरपालिकासँगको सहकार्यमा वर्षौँदेखि पर्ति र ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने तयारी थालेसँगै यहाँ भूमाफियाको जगजगी ह्वात्तै बढेको हो । नगरका वडा […]
लालपूर्जा कीर्तेको हद : जग्गाधनी बेल्जियममा, काठमाडौंको जग्गा अर्कैका नाममा विक्री
काठमाडौं । तपाईंले भविश्यका लागि भनेर जग्गा खरीद गरी राख्नुभएको छ ? यदि छ भने बेलाबेलामा जग्गाको अवस्थाबारे अध्यावधिक गर्नु भएन भने तपाईंको जग्गा अर्कैको नाममा पुगिसकेको हुन सक्छ । त्यसप्रति विशेष ध्यान पुर्याउनु होला । हालै काठमाडौँमा यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ । बेल्जियममा रहेको व्यक्तिका नामको जग्गा त्यसैगरी गिरोहले नक्कली कागजात बनाएर […]
‘गुलजार’ बन्दै घरजग्गा व्यवसाय, दैनिक १५०० बढी किनबेच, यसकारण बढ्दै छ कारोबार
काठमाडौं । घरजग्गा कारोबार गुलजार बन्दै गएको छ। कोरोनाका कारण सुस्ताएको घरजग्गा कारोबार पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै गति लिन थालेको हो । कोरोनाका कारण चैतदेखि असारसम्म भएको घरजग्गा कारोबारले साउनदेखि क्रमशः गति लिएको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म कुल ३ लाख ३० हजार […]
भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने गरी प्रक्रिया शुरु
चितवन । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सैतीस हजारभन्दा बढीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने गरी काम अघि बढाइएको हो । सातवटै पालिकाले आफ्नो निकायभित्र रहेका भूमिहीन तथा सकुम्बासीको लगत सङ्कलन गर्ने काम शुरु गरेका छन् । वडा तहबाटै काम शुरु भएको बताइएको छ […]
स्मार्ट सिटी : सहरको संख्या थपेको थप्यै, निर्माण भने कागजमै सीमित
काठमाडौं । व्यवस्थित र आधुनिक सहरीकरण गर्ने उद्देश्यले देशभर करिब ४ दर्जन स्मार्ट सिटी (नयाँ सहर) निर्माणको घोषणा गरिएको छ । घोषणा गरिएका केही नयाँ सहर निर्माणको काम अगाडि बढे पनि अधिकांश नयाँ सहर निर्माणको काम कागजमै सीमित रहेका छन् । यसअघि देशभर ४५ नयाँ सहर निर्माणको घोषणा गरिएकोमा अहिले फेरि ५ नयाँ सहर […]